Garaad Cali Axmed: "Axmed Madoobe waxba gacanta uguma jiraan, Addis ayaa nagala maamulayaa.., Jen. Gabre ayaa howsha wata" - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Garaad Cali Axmed: "Axmed Madoobe waxba gacanta uguma jiraan, Addis ayaa nagala maamulayaa.., Jen. Gabre ayaa howsha wata" - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Garaad Cali Axmed: “Axmed Madoobe waxba gacanta uguma jiraan, Addis ayaa nagala maamulayaa.., Jen. Gabre ayaa howsha wata”
Garaad Guud ee Beesha Warsengali Daarood Garaad Cali Axmed Maxamed oo ayaa si faahfaahsan uga hadlay xaaladda maamulka Jubba iyo dadaalka socda ee la doonayo in lagu dhiso baarlamaanka maamulka Jubba. Wuxuu si faahfaahsan oo qayaxan uga hadlay Garaadka sida xaalku yahay, wuxuuna kashifay xaaladda dhabta ah ee ka jirta degaankaasi.
Garaad Cali ka sokow xaqa ka maqan jufadiisa ee uu u doodayo haddana wuxuu shaaciyay in waxa meesha ka socda oo dhami uu gacanta ku hayo Nin itoobiyaan ah oo lagu magacaabo Gen. Gabre oo isagu ah qofka dhisaya baarlamaanka taladu ka go’do. Axmed Madoobe ayuu sheegay inaysan waxba gacanta ugu jirin. Wuxuu kaloo sheegay in maamulka Axmed Madoobe uu doonayo inuu xilka kororsado isagoo waxba qaban labadii sano ee uu meesha joogo.
Wareysiga Garaadka ka daawo oo ka dhageyso halkan hoose
[ot-video type=”youtube” url=”https://www.youtube.com/watch?v=lEQhRpUt7t4″]
Previous articleSomalia’s Shebab warn Kenyan public of ‘long, gruesome war’
Next articleXOG: Itoobiya oo caqabad cusub hordhigtay shirkii maamul u sameynta Gobolada Dhexe ee ka furmi lahaa Cadaado